Horudhac: Kooxaha Eibar vs Real Madrid… (Los Blancos oo eegeysa guusheedii saddexaad La Liga ee bannaanka kal ciyaareedkan) – Gool FM
RASMI: Neymar & Mbappe oo hoggaaminaya xiddigaha ay Kooxda PSG u xulatay kulanka Champions League ee Dortmund
DEG DEG: Maamulka horyaalka La Liga oo ka jawaabay codsigii ay Barcelona ku doonaysay inay kula soo wareegto bedelka Dembele
Bernardo Silva oo si cad u sheegay Kooxda uu ku biiri doono haddii uu ka tago Manchester City
Sidee ayay u muuqan kartaa shaxda safka hore ee ay Kooxda Chelsea caawa ku wajahayso Man United oo marti u ah?
Sidee ayay u muuqan kartaa shaxda safka hore ee ay Kooxda Manchester United caawa kala hortagayso Chelsea?
Kurt Zouma oo ka warramay Maalin uu Jose Mourinho ku yiri: “QAASHIN BAA TAHAY”
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Kooxaha Chelsea vs Man United ka hor kulankooda caawa ee Premier League… (Yaa xiddigaha ugu badan ku leh?)
Weeraryahanka cusub ee Man United Ighalo oo la ogaaday waxa uu sameyn doono haddii uu Caawa Gool ka dhaliyo Chelsea… + SAWIRRO
Kooxda Borussia Dortmund oo bedelka Weeraryahankeeda Jodan Sancho ka dhex aragta horyaalka La Liga
Sidee haatan loo kala hoggaaminayaa gooldhalinta horyaalka Somali Premier League?
Horudhac: Kooxaha Eibar vs Real Madrid… (Los Blancos oo eegeysa guusheedii saddexaad La Liga ee bannaanka kal ciyaareedkan)
Haaruun November 9, 2019
(Eibar) 09 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa u safri doonta garoonka Estadio Ipurua maanta oo Sabti ah si ay halkaas ugu wajahdo naadiga Eibar, macallin Zinedine Zidane kooxdiisa ayaana raadinaysa guusheedii saddexaad oo ay bannaanka ku soo gaaraan kulammada horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan.
Los Blancos ayaa kulankeedii ugu dambeeyey ee horyaalka La Liga waxa ay barbaro goolal la’aan ah la gashay Real Betis, inkastoo kulankii ka dambeeyey ee Champions League ay nus darsan goolal ah 6-0 ku xaaqeen Naadiga Galatasaray.
Dhinaca kale Kooxda Los Armeros lagu naanayso ayaa guuleysatay saddex ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay oo ay ku jiraan guulihii ay ka gaareen Sevilla iyo Villarreal.
Tartanka: Spain – La Liga Santander
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 8:30 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Adrian Cordero Vega (Spain)
Hoggaamiyaha kooxda Eibar ee Jose Luis Mendilibar ayaa la filayaa in uusan waxba ka badalin xiddigihii ugu soo wada bilawday kulankii ay guusha ka gaareen Kooxda Leganes.
Xiddigaha kala ah Fabian Orellana iyo Anaitz Arbilla ayaa hal jaalle u jira inay seegaan kulanka kale ee xiga dheesha Real Madrid.
Sidoo kale Kike Garcia iyo Charles ayaa laga doorbidi karaa Sergi Enrich dhanka weerarka marka loo eego shaqadiisii wacnayd ee kulamadii la soo dhaafay.
Maadaama uu qabo dhaawac dhanka jilibka ah xiddiga Real Madrid ee Gareth Bale ayaa wali shaki uu ku jiraa inuu ciyaari karo kulankan, inkastoo uu ku jiro xiddigaha isbuucaan loo soo xushay inay matali doona xulka qaranka Wales.
James Rodriguez ayaa sidoo kale shaki uu ku jiraa inuu ciyaari karo, iyadoo Real Madrid ay rajaynayso inuusan la safrin Colombia bishaan, maadaama xulkiisa uu ciyaarayo kulammada heerka qaran.
Da’yarka reer Brazil ee wacadaraha dhigaya fasal ciyareedkan ee Rodrygo ayaa markale ku soo bilaaban kara garabka midig kaddib markii uu saddexleey dhaliyay bartamihii isbuucan kulan qeyb ka ahaa Koobka Horyaalada Yurub ee Champions League.
>- Kooxda Real Madrid ayaa guuleysatay sagaal ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ka hortimid kooxda Eibar dhammaan tartamada oo dhan.
>- Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool sagaal ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay ka horyimaadeen Eibar tartammada oo dhan.
>- Naadiga Eibar ayaa si xiriir ah u dhibaatoonaysay shantii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ka horyimaadeen Real Madrid tartammada oo dhan, waxaana laga dhalinayay isku celcelis ahaan kulan walba 2.5 gool.
>- Real Madrid ayaa shabaqeeda ilaashatay shan ka mid ah todobadii kulan ee u dambeeyay oo ay ka ciyaartay horyaalka La Liga, waxaana ay taasi ka dhigan tahay in Kooxda Zidane ay dadaal badan sameynayso.
>- In ka badan labo gool ayaa laga dhaliyay Eibar shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay ooay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga taasi oo muujineysa in difaaca kooxdu uu biyo deys yahay.
>- Kooxda Real Madrid ayaan laga badinin 10 ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ka ciyaarta horyaalka La Liga.
Horudhac: Inter Milan vs Verona… (Nerazzurri oo si ku meel gaar ah ula wareegi karta caawa hoggaanka horyaalka Serie A)
Horudhac: Leicester City vs Arsenal… (Foxes oo doonaysa inay bandhiggeeda wacan sii joogteyso marka ay caawa soo dhoweynayso Gunners)